ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဂိမ်းတစ်ခုလည်ပတ်နေသည်ကိုမည်သို့သိနိုင်သနည်း🥇 Emulator.online ▷🥇
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဂိမ်းတစ်ခုလည်ပတ်နေသလားကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကဲ့သို့သောအထူးကိရိယာများ၏အကူအညီဖြင့်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည် ငါ run လို့ရမလား။ သင်၏ကွန်ပျူတာကိုမလိုချင်ပါကသတ်မှတ်ချက်များကိုကိုယ်တိုင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုသွားနိုင်သည်။
စျေးကွက်ရှိအဓိကဂိမ်းများကတောင်းဆိုသောအနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်အထူးပြုသောဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိသည်။ OR ငါ run လို့ရမလား လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သင်၏စက်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုအလိုအလျှောက်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
1. သင်ရွေးချယ်သောဘရောင်ဇာကိုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်ဖွင့်နိုင်သည်လားသွားပါ။
2. ပင်မစာမျက်နှာတွင်သင်ဂိမ်း၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ရန်ရှာသည့်အကွက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ The Sims အကယ်၍ ဂိမ်းကိုစာမျက်နှာကတ်တလောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါက၎င်းစာရင်းသည်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ရှာဖွေမှုအမှားများကိုရှောင်ရှားရန်ပေါ်လာသောအမည်ကိုနှိပ်ပါ။
3. ထို့နောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ သင်၎င်းကို run နိုင်သည် သုတေသနလုပ်ရန်;
4. နောက်စာမျက်နှာတွင်ဂိမ်းကို run ရန်အနိမ့်ဆုံးနှင့်စံပြလိုအပ်ချက်များကိုပြလိမ့်မည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန်အတွက်သင်၏စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်အားအတည်ပြုရန်ဖိုင်တစ်ခုကို download ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ သင်၎င်းကို run နိုင်သည် လျှောက်လွှာကို website မှကူးယူရန်၊
5. executable file ကိုဖွင့်ပြီး website page ကိုဖွင့်ထားပါ။ သင်၏ပရိုဂရမ်သည်သင်၏စက်ကိုအလိုအလျောက်စပြီးလေ့လာလိမ့်မည်။
browser ပေါ် မူတည်၍ download ဆွဲပြီးသည်နှင့် program ကို screen ၏အောက်ခြေတွင်ပြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် download list တွင်လည်းရရှိနိုင်ပါသည် ဘရောက်ဇာ နှင့် ဦး တည်ရာဖိုင်တွဲထဲမှာ၏သင်တန်း။
6. Diagnostic time သည်စက္ကန့်အနည်းငယ်မှမိနစ်အနည်းငယ်အထိကွဲပြားပြီးရလဒ်ကိုသင်ဖွင့်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်၏စက်တွင်အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည့်လိုအပ်ချက်များရှိ၊ မရှိနှင့်အကြံပြုထားသည့်ဂိမ်းများရှိပါသလား၊
ဂိမ်းများသည် PC ပေါ်တွင်လည်ပတ်ခြင်းရှိမရှိကိုရှာရန်အခြားဆိုက်များ
PCGameBenchmark သည်သင်၏စက်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုအလိုအလျောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောသင်၏ဆော့ဝဲလ်များကိုထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့နောက်ဂိမ်း၏အမည်ကိုသာရှာပါ။
EA ခေါင်းစဉ်များအထူးပြုထားသော်လည်း Game Debate တွင်အခြား developer များထံမှရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ယခင် tool တစ်ခုကဲ့သို့၎င်းသည်သင့်အားအချက်အလက်များကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် PC နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုချက်ချင်းကောက်ယူသော application ကို download လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါကြောင့်သင်လိုချင်သောဂိမ်းကိုသာရှာဖွေပါ။
ဂိမ်းတစ်ခုသည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်သည်ကိုသိရန်အခြားနည်းတစ်နည်းမှာ PC ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုအပ်သောအနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့် PC ကိုကိုယ်တိုင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဖြေသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့် ပို၍ ကြာနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
သင့်ကွန်ပျူတာ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သူတို့ထဲကအရိုးရှင်းဆုံးကတော့ဝေါဟာရကိုရေးသားခြင်းဖြစ်တယ် Msinfo32.exe Windows ရှာဖွေရေး box ထဲမှာ။ စနစ်၏ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ ရှာဖွေရေးကိရိယာကို toolbar (သို့) Start menu (၀ င်းဒိုးအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်) ရနိုင်သည်။
ရှာဖွေမှုရလဒ်မှာကိုနှိပ်ပါ Msinfo32.exe ဖွင့်လှစ်ရန်။ သင်မလုပ်နိုင်လျှင်သင်လုပ်ရန်လိုကောင်းလိုပေမည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအနေဖြင့် run ပါ။ ထို option ကိုကြည့်ရန်, ရလဒ်ပေါ်တွင်ညာဖက်နှိပ်ပါ။
ပြတင်းပေါက်၌ စနစ်သတင်းအချက်အလက်, ဘယ်ဘက်ခြမ်း bar ပေါ်မှာ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ စနစ်အကျဉ်းချုပ်။ သင်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည် လည်ပတ်ရေးစနစ် (1), ပရိုဆက်ဆာ (2) mi မှတ်ဉာဏ် (3).
သိုလှောင်မှုကိုစစ်ဆေးရန်ကိုနှိပ်ပါ သိုလှောင်မှု ပြီးတော့၌တည်၏ ယူနစ်.
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ဗီဒီယိုကဒ်ပုံစံကိုရှာဖွေရန်ကိုနှိပ်ပါ အစိတ်အပိုင်းများ ပြီးတော့၌တည်၏ ထိတွေ့မှု။ သင့်ကွန်ပျူတာတွင်သီးသန့်ကဒ်နှင့်ကဒ်ပါ ၀ င်ပါကနှစ်မျိုးစလုံးရှိဒေတာများကိုပြလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန် PC ဆက်တင်များကိုကြည့်ပါ ကွဲပြားခြားနားသော ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်ကိုရှင်းပြသည်။ သင်ဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုသိလိုပါလျှင်မေးပါ။
လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်လိုလျှင်၊ သင်ပရိုဂရမ်ကိုသုံးနိုင်သည် SpeccyCCleaner ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒီအခမဲ့ဗားရှင်းဟာဟာ့ဒ်ဝဲကိုစစ်ဆေးပြီးဂိမ်းကသင့်စက်နဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိမရှိသိနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ၊ ထည့်သွင်းပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ Speecy ပြေးပါ။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း၊ စက်ကိရိယာနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် CPU နှင့် video card တို့၏အပူချိန်ကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။
သင့်ကွန်ပျူတာ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များလက်ထဲရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဂိမ်းတွင်ကစားရန်ဂိမ်းအတွက်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုသာစစ်ဆေးပါ။ ဤအချက်အလက်များကိုများသောအားဖြင့် developer များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်၎င်းတို့ကိုလက်ခံသည့်ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ Steam တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုကဏ္ section အောက်တွင်တွေ့နိုင်သည် ဒီဂိမ်းအကြောင်း။ en စနစ်လိုအပ်ချက်များ, PC မှာဂိမ်းကိုသုံးရန်နိမ့်ဆုံးနှင့်အကြံပြုလိုအပ်ချက်များကိုဖြစ်ကြသည်။
Fifa 21 ကိစ္စတွင်အောက်ပါရလဒ်ကိုပြလိမ့်မည် -
ငါ run နိုင်သလား PCGameBenchmark နှင့် Game Debate ကဒီဒေတာကိုပေးသည်။ ၎င်းတို့အပြင်ဂိမ်းစနစ်လိုအပ်ချက်များစာမျက်နှာလည်းရှိသည်။
အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များ x အကြံပြုထားသောလိုအပ်ချက်များ
အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များသည်ဂိမ်းကစားနိုင်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုပြသည်။ သို့သော် အကယ်၍ ကွန်ပျူတာတွင်အကြံပြုချက်များရှိပါက၎င်းသည်ပိုမိုချောမွေ့ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်များကဲ့သို့ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
operating system နှင့်လိုအပ်သော disk space သည်အနည်းဆုံးနှင့်အကြံပြုထားသောလိုအပ်ချက်များအကြားကွဲပြားမှုမရှိပါ။ ပရိုဆက်ဆာနှင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်တို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားအလွန်ကွဲပြားနိုင်သည်။
အားနည်းသောကွန်ပျူတာများတွင်ကစားရန်အကောင်းဆုံးနှင့်အပေါ့ဆုံးသော Android emulators
အားနည်းနေတဲ့ PC အတွက် screen recording လုပ်နိုင်ပါတယ်
သင်၏ဖုန်းကိုစမတ်မဟုတ်သောတီဗီနှင့်နည်းလမ်း ၅ ခုဖြင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း